ไทยสู้ โควิด-19 ပုံပြအချက်အလက်များ – ไทยสู้ โควิด-19
5 วิธีดูแลตัวเอง รับมือสู้โควิด-19 ကိုဗစ်-19 ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်နည်း5မျိုး
ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုဗစ်-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွါးသည့်အခြေအနေထဲသို့ ကျရောက်နေပါသဖြင့် မိမိကိုယ်နှင့်မိမိချစ်တဲ့သူများ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးမှ ကင်းဝေးစေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဥ်နေထိုင်မှုဘဝတွင် အတတ်နိုင်ဆုံးသတိထား ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- 100% နှာခေါင်းစည်းကို ရာနှုန်းပြည့်တပ်ပါ။
- လူထူထပ်သော (သို့) ရောဂါကူးစက်လွယ်သောနေရာများကို မသွားပါနှင့်။
- ပူနွေးအစားအစာ စားပါ။ တစ်ယောက်သုံးဇွန်း သုံးပါ။
- တတ်နိုင်သမျှ မိမိအိမ်တွင်သာနေပါ။
ณ เวลานี้ เรายังตกอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด- 19 เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสชนิดนี้ เราควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่างมากที่สุด ด้วยการสวมหน้ากาก 100 % ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ไปในที่แออัด หรือสุ่มเสี่ยง กินร้อน ใช้ช้อนเรา และอยู่ในที่พักให้มากที่สุด
ใกล้จะถึงสงกรานต์ 2564 เช็กเลย อะไรบ้างที่ทำได้ และไม่ควรทำ ? 2021 ခုနစ်သကြင်္န်ရောက်ခါနီးပြီဆိုတော့ ဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲ၊ ဘာတွေမလုပ်သင့်ဘူး ဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်
10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยรายใหม่สูงสุด ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ပိုးတွေ့လူနာသစ်အများဆုံး 10 ခရိုင် 5/6/2021 ရက်နေ့၊ နေ့လည် 1 နာရီ ထုတ်ပြန်ချက် အရင်းမြစ် – ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ပြည်သူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
แม่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อ COVID-19 ก็สามารถให้นมลูกได้ ကိုဗစ်-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသော သို့မဟုတ် သံသယရှိလူနာြဖစ်သောမိခင်သည် မိမိရင်သွေးကို နို့တိုက်ကျွေးနိုင်ပါသည်။
มาตรการควบคุมโรค COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ကျန်းမာရေးဝန်းကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံသားများသို့အသိပေးခြင်း
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ณ ที่พักอาศัย ကိုဗစ်-19 ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် သံသယရှိအိမ်နေလူနာများအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်အချက်များ
ใคร? คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงติดเชื้อ COVID-19 ဘယ်သူတွေ ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ကူးစက်နိုင်ခြေများသလဲ။